ပိတောက်ပွင့်သစ် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ပိတောက်ပွင့်သစ်
Posted by padonmar on Mar 9, 2013 in Creative Writing, Photography | 17 comments
ဒီရက်ထဲ ရန်ကုန်နဲ့ အနီးတစ်ဝိုက်မှာ မိုးနည်းနည်းရွာသွားတယ်။
ရာသီဥတုက တအားပူနေရာကနေ နည်းနည်း အေးသွားတာပေါ့။
ဒီကနေ့ အိပ်ရာက နိုးတော့ အိမ်ရှေ့ကပိတောက်ပင်ကြီးပွင့်နေတယ်။
ပိတောက်ပန်းကို ကြိုက်လှချည်ရဲ့ မဟုတ်ပေမယ့်
ပိတောက်ပွင့်တာမြင်ရင် မိတ်ဆွေဟောင်းနဲ့ ပြန်တွေ့ရသလို ၀မ်းသာမိပါတယ်။
ရန်ကုန်မြို့ထဲလည်း ပန်းပိတောက်တွေ ကားတွေပေါ်မှာ၊မိန်းမလှဆံကေသာတွေပေါ်မှာ တွေ့နေရပါတယ်။
ဒီလို ထူးထူးခြားခြား အခါထက်စောပြီးပွင့်လိုက်တဲ့ ပိတောက်တွေဟာ
ဒီနေ့ မတ်လ ၉ ရက်မှာ စတင်ကျင်းပတဲ့ NLD ရဲ့ ညီလာခံကြီးကို ကြိုဆိုတဲ့ ပိတောက်လို့ ပြောနိုင်ပါတယ်။
ညီလာခံကြီးကနေ မြန်မာပြည်ကြီးရဲ့ ငြိမ်းချမ်းသာယာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သော အနာဂတ်ပန်းချီကား ရေးဆွဲနိုင်ပါစေလို့
မနှစ်ကလည်း ဒီ ပိတောက်ပင်ကြီး အခါမဟုတ်ပွင့်လို့ ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီး လက်ဆောင်ပေးခဲ့ပါသေးတယ်။
ရွာသူရွာသားတို့အတွက် ပိတောက်လက်ဆောင်ပေးပါရစေ– padonmar
Posted by padonmar on Dec 3, 2011
အဲဒီရက်ကတော့ ဟီလာရီ ရန်ကုန်လာတဲ့ အချိန်ဆိုတော့ မြန်မာ-အမေရိကန် ချစ်ကြည်ရေးပိတောက်ပေါ့။
အခုဒီနှစ်ပွင့်တာကတော့ ဒို့ဘကြီးစိန် ဥရောပ ၅နိုင်ငံ လှည့်လည်ပြီး ပြန်လာတဲ့ရက်နဲ့ တိုက်ဆိုင်လို့
မြန်မာ-ဥရောပ ချစ်ကြည်ရေးပိတောက်လို့လည်း တင်စားချင်ပါတယ်။
ဘကြီးစိန်ကိုလည်း နိုဘယ်ဆုတောင်ရနိုင်တယ်လို့ ပြောကြတော့
ပိတောက်ပန်း လက်ဆောင်ပေးပြီး တောင်းဆုချွေပေးလိုက်ပါတယ်။
ရခဲ့ရင် တစ်နိုင်ငံတည်း ငြိမ်းချမ်းရေး နိုဘယ်ဆုရသူ နှစ်ယောက် စံချိန်တင်သွားမှာပေါ့။
ဆုရလောက်တဲ့ တိုင်းရင်းသားများနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး၊ပြည်သူပြည်သားများနဲ့ တရားမျှတမှု အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရေး တွေလည်း
ကျမတို့ တစ်သက်တာ နှစ် ၅၀ ခရီးမှာ ဘကြီးစိန်လောက်ကောင်းတဲ့ အာဏာရှိသူ မတွေ့ဖူးသေးသမို့
မမြင်ဖူး မူးမြစ်ထင်တယ်ပြောကြလည်း ခံရမှာပါပဲ။
တိုင်းပြည်ရဲ့ရှေ့ခရီးမှာ ဘကြီးစိန်ထက်ကောင်းသောတော်သော နိုင်ငံနဲ့ပြည်သူကိုဦးစားပေးသော နိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင်များနဲ့ တွေ့ကြရပါစေလို့ ဆန္ဒပြုပါတယ်။
ရွာသူားအားလုံး/မြန်မာပြည်သူပြည်သားအားလုံး သက်ရှည်ကျန်းမာ ဘေးရန်ကွာ လိုရာဆန္ဒပြည့်ပါစေ။
(ကိုယ့်ထက် နှစ်ရက်သုံးရက်လောက်ကြီးတဲ့ဟာကို အမ တပ်ခေါ်ပြီး ကလေးလုပ်ရတာ အရသာရှိလိုက်တာနော် )
NLD ညီလာခံကို ကြိုဆိုတဲ့ပိတောက်
ဘကြီးစိန်ကို ကြိုဆိုတဲ့ပိတောက် တွေလိုပဲ
စောစောမွှေးပါစေ …. ဗျာ…
မုန့်ဟင်းခါးရောင်းဖို့ စိတ်ကူးခဲ့တဲ့ မြန်မာပြည်ရဲ့ ဖတ်စ်လေဒီ””
အချိန်ကတော့ ၂၀၀၅ ခုနှစ်ထဲမှာပါ။ ဦးသိန်းစိန်ဟာ န.ယ.က အတွင်းရေးမှူး(၁)တာဝန် ယူထားရပါတယ်။ ဝန်ကြီးချုပ်က ဦးစိုးဝင်းပါ။ ဦးခင်ညွန့်နဲ့ ထောက်လှမ်းရေးတစ်ဖွဲ့…လုံး ရှင်းပြီးကာစအချိန်ပေါ့။ ဦးသိန်းစိန်ဟာ ကျန်းမာရေးကလည်း တော်တော်လေးမကောင်း၊ သူရဲ့ အထက်/ဘေး/အောက်ကလူတွေ လုပ်ဆောင်ပုံ ကလည်း သူ့ခံယူချက်၊ သူ့လုပ်ဆောင်ချက်တွေနဲ့ အစပ်အဟပ်မတည့်ဆိုတော့ အင်မတန်စိတ်ညစ်ပြီး အနား ယူဖို့ စိတ်ကူးပါတယ်။ ဦးသိန်းစိန်က နားဖို့စိတ်ကူးပြီဆိုတော့ ဒေါ်ခင်ခင်ဝင်းကလည်း ရှေ့ဆက်မယ့်ဘဝခရီးမှာ မိသားစုဝမ်းရေးအတွက် အကြံထုတ်ရတော့တာပေါ့။ တပည့်တချို့နဲ့ တိုင်ပင်မိတဲ့အချိန်မှာ အန်တီကြီးက သူ မုန့်ဟင်းခါးတော့ ချက်တတ်တယ်။ ရှမ်းခေါက်ဆွဲချက်မယ့်သူ တစ်ယောက်လောက် ထပ်ရှာမယ်။ အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးဝင်းထဲမှာ ဆိုင်ခန်းတစ်ခန်း လချုပ်နဲ့ငှါးပြီး ဆိုင်ဖွင့်မယ်လို့ အကြံရပါတယ်။
ခင်ဗျားတို့ကတော့ ရီနေကြမယ်ထင်တယ်။ ဦးသိန်းစိန်မိသားစု အဲဒီလောက်ထိ အခြေအနေဆိုးပါ့မလားဆိုပြီး။ ဒီမှာကိုယ့်လူ … ခင်ဗျားသိအောင် ပြောပြမယ်။ ဦးသိန်းစိန်ဟာ တြိဂံဒေသ တိုင်းမှူးက လာတာ။ တိုင်းမှူးတစ်ယောက်ဟာ ဘယ်လောက်အထိ လုပ်နိုင်သလဲဆိုရင် ကျောက်စိမ်းဒေသ မြောက်ပိုင်းတိုင်းရဲ့ တိုင်းမှူးဟောင်းတစ်ယောက်ဟာ ရန်ကုန်ကသူ့အိမ်ကြီးမှာ ကျောက်စိမ်းပြားတွေကို တအိမ်လုံးအပြည့် ကပ်ထားတယ်ဗျ။ ဦးသိန်းစိန်ကိုင်ခဲ့တဲ့ တြိဂံဒေသတိုင်းဟာ ကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းရော၊ ဘိန်းရော၊ စိတ်ကြွဆေးရော စုံလို့ … စုံလို့ … ။ တိုင်းမှူးပြီးတော့ န.ယ.က အတွင်းရေးမှူးဖြစ်လာသေးတယ်။ သူဖြတ်သန်း ခဲ့တဲ့ နေရာတွေဟာ သူသာစိတ်ရှိမယ်ဆိုရင် ကိုယ်တိုင်ဘာမှ လုပ်နေစရာမလိုဘူး။ မျက်နှာလေး လွှဲထား လိုက်ရုံပဲ။ သဘောပေါက်။ ဒါပေမယ့် ဦးသိန်းစိန်ဟာ အဲဒီလိုစိတ်မျိုး အရင်ကလည်း မရှိခဲ့၊ နားတော့မယ့် ဆဲဆဲ မှာ လည်း ရှိလာမှာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာကို တသက်လုံးပေါင်းလာတဲ့ အန်တီကြီးက သိလို့ အခုလို မုန့်ဟင်းခါး ရောင်းဖို့ စိတ်ကူးရတာပေါ့။
အန်တီကြီးရဲ့အကြံ ဘာကြောင့်အကောင်အထည်မဖော်ဖြစ်တာလဲဆိုရင် ဘရွှေကြီးက ခွင့်မပြုတာနဲ့ ဦးသိန်းစိန်ဟာ မနားလိုက်ရပါဘူး။ ဒီနေ့ ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ ဖြစ်ရပ်လေးဟာလည်း ဒါပါပဲ။
သိပ်မကြာသေးခင်က အဖြစ်လေးကိုလည်း ကြားမိလိုက်မယ် ထင်ပါတယ်။ ကလေးဆေးရုံမှာ လာတက်တဲ့ကလေးကို ဆေးရုံဆင်းသွားမှပဲ သမ္မတကြီးရဲ့မြေးမှန်း သိလိုက်ကြတယ်ဆိုတာလေ။ လူသိပ်မသိလိုက်တဲ့ အဖြစ်လေးတစ်ခုကို ပြောပြချင်ပါသေးတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ထဲမှာ သမ္မတကြီးနဲ့ ဝန်ကြီးတချို့ လေယာဉ်နဲ့ ရန်ကုန်လေဆိပ်ကို ရောက်လာကြတယ်။ လူကြီးတွေအကုန်လုံး လေယာဉ်ပေါ်ကဆင်း၊ လာကြိုတဲ့ကားတွေနဲ့ အလျှိုအလျှို ထွက်သွားပြီးမှ သမ္မတကြီးရဲ့သမီးဟာ ကလေးချီပြီး လေယာဉ်ပေါ်က ကုပ်ကုပ်ကလေးဆင်း၊ နောက်ဘက်ကနေ တိတ်တိတ်ကလေး ထွက်သွားရတယ်။ ဒါတောင် သမ္မတကြီးက ကလေးငယ်ငယ် ကားနဲ့ဆင်းရင် ပင်ပန်းမှာကို သနားလို့ လိုက်ခွင့်ပြုပြီး ပါလာတာ။ အဲဒီကလေးကြီးပြီဆိုရင် အခုလို လိုက်ရဖို့ မမြင်ဘူး။
ခင်ဗျားတို့ဟာ သိပ်ကြီးမကြာသေးတဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေကို မေ့မပစ်ကြပါနဲ့ဦး။ ရုပ်ဆိုး၊ ပုပ်သိုး၊ လိပ်ထော ဆိုတဲ့ သမီးတော်တွေ ကြီးစိုးမင်းမူခဲ့တာတို့၊ စိန်မျောက်မျောက်၊ ဖိုးလပြွတ် ဆိုတဲ့ မြေးတော်တွေ အထူးအခွင့်အရေးနဲ့ သောင်းကျန်းခဲ့တာတို့ဟာ ပြီးခဲ့တာမှ သုံးခါလည်တောင်မရှိသေးဘူးဗျ။ အဲဒီလိုလူစားတွေ ကမ္ဘာပေါ်က အပြီးတိုင် ပျောက်သွားပြီလို့များ ထင်နေကြပြီလား။ နောက်ထပ် ပေါ်မလာနိုင်ဘူးလို့များ ထင်နေကြပြီလား။ အဲဒီလိုခေတ်ကို ပြန်မရောက်ဖို့ ဆုတောင်းတဲ့အထဲမှာတော့ ကျွန်တော်လည်း ထိပ်ဆုံးကတစ်ယောက်ပဲဗျို့။
ကျွန်တော်ဟာ ဒီအကြောင်းတွေကို သိထားပေမယ့် ချရေးစရာ ကိုယ်ပိုင်ဘလော့ဂ်လည်းမရှိ၊ နာမည်ဝှက် (Fake Account)ကလည်း မရှိတာနဲ့ အများသိအောင် ထုတ်မပြောဖြစ်ခဲ့တာပါ။ ဒါပေမယ့် အထက်မှာ ပြောခဲ့သလိုပဲ … ရှိနေတုန်းမှာ ချစ်ဖို့ကောင်းတာလေးတွေအပေါ် ချစ်သင့်တယ်ထင်လို့ အခုလို အလျဉ်းသင့်တဲ့နေရာက တင်ပြရတာပါ။ ခင်ဗျားတို့ကတော့ ထင်မယ်။ ဒီကောင် ဦးသိန်းစိန်ရဲ့ တပည့် ဖော်လံဖားထဲက ဖြစ်မယ်ပေါ့။ တပည့်မဟုတ်ရပါဘူး။ သူတို့မိသားစုနဲ့ တစ်ခါမှ မပတ်သက်၊ မဆက်ဆံဘူးပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဒီလို စိတ်ထားကောင်းတဲ့သူတွေကို ဖော်လံဖားနေတယ် အပြောခံရရင်တော့ ခံနိုင်ပါတယ်ဗျာ။ စိတ်ဓာတ်အောက်တန်းကျတဲ့ သူတွေအောက်မှာ နှစ်ပေါင်းများစွာ ဖားခဲ့/ပြားခဲ့ရသေးတာပဲ။
ကဲ… မိတ်ဆွေ။ တကယ်လို့ အန်တီကြီး ဒေါ်ခင်ခင်ဝင်းသာ မုန့်ဟင်းခါးရောင်းဖြစ်ခဲ့ရင် ခင်ဗျား သွားစားမလား။ ကျွန်တော်ကတော့ သွားမယ်။ ဒီလောက် စိတ်ရင်းစိတ်ဓာတ် ကောင်းတဲ့သူတွေ ချက်တာပဲ … ထည့်ရမယ့် အမယ်တွေကို ဘယ်ဟာမှ ခိုထားမှာ မဟုတ်ဘူး။ စေတနာဆိုတဲ့ အမယ်ကလည်း ပမာဏအများကြီးပါဦးမှာ။ အဲဒီဆိုင်သာ ဖွင့်ခဲ့ရင် ခင်ထွေးရီတို့၊ မြောင်းမြဒေါ်ချိုတို့တောင် ဒေဝါလီ ခံသွားရဦးမယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ အကြော်နှစ်ခုလောက်ထည့်ပြီး အိုးဘဲဥ၊ ငါးဖယ်နဲ့ ကျကျနန စားပစ်မယ်။ ဟင်းရည်ကိုလည်း တစ်ပန်းကန်အပြည့်တောင်းပြီး သောက်ပစ်မယ်။ ပြီးရင် မီးဖိုချောင်ထဲအထိ ဝင်သွားပြီး ဟင်းရည်အိုး ကူမွှေပေးလိုက်ဦးမယ်။ ခင်ဗျားအနေနဲ့လည်း မီးဖိုထဲထိ မလိုက်ချင်ရင်တောင် မုန့်ဟင်းခါးကိုတော့ အားပေးချင်လိမ့်မယ်လို့ ထင်မိပါတယ်။ ဟုတ်ရဲ့လား။
Credit to Myanmar Online NewsSee More
… စနစ်ကောင်းတွေကို စတင်ခဲ့
သူ့မှာ တိုင်းပြည်အတွက်လက်တွဲမယ့် ဒေါ်စုရှိတယ်
သူ့မှာ တိုင်းပြည်အတွက်လက်တွဲမယ့် ကိုမင်းကိုနိုင်ရှိတယ်
သူ့မှာ တိုင်းပြည်အတွက်လက်တွဲမယ့် ပြည်သူတွေရှိတယ်
ဖိအားက လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို နှောင့်နှေးစေတယ်
စနစ်ဟောင်းကို ဦးဆောင်တော်လှန်နေတဲ့သူ ။
သူမုန့်ဟင်းခါးရောင်းရင် ကျနော် အချိုမှုန့် လက်ကားဈေးနဲ့ ပေးမယ်လို့ ပြောပေးပါဗျာ။ သမဒဂျီး မုန့်ဟင်းခါး ရောင်းကောင်းပါစေ.. ဒါမှ ဂိုဒေါင်ထဲက ငါ့အချိုမှုန့်တွေ ကုန်မှာ။ ဘွားဒေါ်ဂျီးလည်း အုန်းနို့ခေါက်ဆွဲ ရောင်းဖို့ကြံနေဂျောင်း သူ့လူတွေကို သတင်းလွှင့်ခိုင်းရမယ်၊ နိုင်ငံရေးမှာ လက်ဦးမှုယူဖို့ သိပ်အရေးကြီးတယ်ကွ။ ငါ့အတွက်လည်း အချိုမှုန့် လက်ကားဖောက်သည်ဂျီး နှစ်ယောက်တိုးတာပေါ့။ :harr:
ဘကြီးစိန်ထက် ကောင်းသူ လာသော်ငြား
ကြီးမေထက် ကောင်းသူ လာသော်ငြား
(ဘီလျံများစွာ သက်သာ တဲ့ ဈေး နဲ့ ရတဲ့ ကန်တော်ကြီးဟိုတယ်၊ တောင် ၃၃ လုံးမှာ နှစ်လုံးမှာ သပ်ိတ်တပ်စွဲတာရယ် ၊ပြန်လည်ဖြေရှင်းခွင့် တောင်မပေး ဘူး ။ ကိုယ်စားလှယ် အဖြစ်က အထုတ်ခံလိုက်ရတယ် ဆိုတာတွေ ရယ်နဲ့ ဆိုတော့ )
အန်တီပေးတဲ့ ဆုနဲ့ ပြည့်ပါစေ
အန်တီပေးတဲ့ ဆုနဲ့ ပြည့်ပါစေ
ဒီနှစ်လယ်ထဲ.. သမ္မတကဖိတ်လို့.. သမ္မတက..ယူအက်စ်လာမယ်..
ကောင်းတာတွေဖြစ်လာအောင်.. ကြိုးစားလုပ်နေသူတွေ.. လုပ်ရပ်သာဓုခေါ်ပါတယ်..။
အားပေးကူညီခွင့်ရရင်.. ကူညီဖို့လည်း အသင့်ပါ..။
ဘာပဲပြောပြော.. ဒီနှစ်ဆန်းတင်.. လူထုကို.. ကိုယ်ပိုင်သတင်းစာထုတ်ခွင့်တွေလည်း.. ပေးလိုက်သမို့.. ဦးသိန်းစိန်အစိုးရအဖွဲ့နဲ့.. လွှတ်တော်ဥက္ကဌတို့ .. ဦးဆောင်လုပ်နေတာတွေဟာ.. မြန်မာ့သမိုင်းမှာ မရှိလှအောင်ရှားပါကြောင်း.. အသိအမှတ်ပြုပါ၏..။
ဂဇက်ထဲဝင်လိုက်တော့ ပိတောက်ပန်းနံ့တွေ မွှေးသွားပါတယ်ဆိုပြီး
မင်းသမီးကြီးလေဘာတီပဒုမ္မာ အိမ်ရှေ့က ပိတောက်ပင်ကြီး
ပေးတဲ့ဆုနဲ့ပြည့်ပါစေ မင်းသမီးကြီးပဒုမ္မာရေ- :hee:
၂၀၀၈ တုန်းကထင်တယ် မှတ်မိသေးတယ်
နေ့လည် ၂နာရီလောက်ကပေါ့ ……………။
ထိုင်စရာခုံမရလို့ ဆိုဒ်တေဘယ်လ် ခေါ်မလား ..
အဲ့ပေါ်မှာ ကျုံ့ကျုံလေးထိုင်ပီး ဆီချက်ခေါက်ဆွဲ ၂ပွဲအုပ်တာ
တမနက်လုံး ဘာမှ မစားရသေးဘူးတဲ့ ဆေးသောက်ဖို့ အစာမရှိလို့ပါတဲ့
ထားပါ ဒါက သူရို့ကိစ္စ …
အန်တီပဒုမ္မာရေ ကျနော့် အမြင်ကတော့
အရှိကို အရှိအတိုင်း ပွင့်လင်းမြင်သာစွာဖြင့်
လူတွေ စနစ်တွေ( credit to site Admin ) အားလုံး တက်ညီလက်ညီ ချီတက်စေချင်ပါတယ်။
တိုင်းပြည်တိုးတက်ပြီး လူနေမှုအဆင့်အတန်းမြင့်မားလာတော့ ဂုဏ်ထည်တာပေါ့ဗျာ ………..။
စိတ်ထဲကနေ ဆုမွန်ကောင်း တောင်းမရဖြစ်နေတယ်..
ကိုအောင်ပု ဒီပို့စ်လာလည်မှပဲ ..
ခင်ဗျားကို မြှောက်သလို ပင့်သလိုနဲ့
By: ဥက္ကာ ၁၀:၀၀ ၆.၃.၂၀၁၃
– – – – — – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – — – – – – – – – – – – –
မတူတဲ့ အတွေးနဲ့ ရေးထားတဲ့ ကဗျာလေးမို့ စုဖတ်လို့ရအောင်ပါဗျို့။
ကျန်တာ တော့ မပြောချင်တော့ဘူးရယ်။
ဦးကြောင် ကော်မန့်တော့ အတော်သဘောကျတယ် ဝန်ခံပါရစေ။
အဲ့ဒါလေး..Fb မှာတွေ့ထဲက သဘောကျနေတာ၊ ပြောချင်တဲ့စကားတွေပါပဲ….
အရမ်းကြီးတော့ ဥာဏ်မမီပေမယ့်လည်း… အကောင်းလေးတွေကို မြင်နေရတာကိုတော့ လက်ခံမိပါတယ်….
ရန်ကနား လဲ ဗယာကြော် ကြော်ရောင်းမယ်
ချွတ်ကရီး ကို အမြဲ သွေး ထားပြီးသား
အပေါ်ဂ လူဂျီးဒွေ …
ဘာဒွေ မန့်နေဂျဒါလဲ နားဒေါ့လည်ဝူးးး
ဒါနဲ့ဘဲ … ကျော်ခွတွားလိုက်ဒယ် ဆိုဘာစို့ … ဟီးးး
တားဂဒေါ့ ပိတောက် ပွင့်ဒါဘဲ တိဒယ်ဂျ ….
ပေါရရင်ဒေါ့ဂျာ … အချိန် မတိုင်ခင် ပွင့်ဒါ ….
ဘာပေါပေါ … အဲ့လို အချိန်မတိုင်ခင် ပွင့်ဒေါ့ ..
တင့်ဒလောက် မတယ်နိုင်ဘူး ဖစ်တွားဒယ် ….
ဂလောက်ဘဲ တား သိဒယ် …
ဦးသိန်းစိန် အဆိုးထဲက အကောင်းဖြစ်အောင်လုဎ်သွားနိုင်တယ်လို့ ထင်မိတယ် ဆရာမကြီးရေ အချိန်ကြာလာလေလေ မြန်မာပြည်တိုးတက်လာမယ်လို့ထင်နေကြတယ် (ပြည်ပကနိုင်ငံခြားသားများ ဝေဖန်ချက်) သူဒို့က တရုတ်ပြည်
မ ဗီယက်နမ်မှာ စီးပွါးရေးလုဎ်နေတဲ့ စီးပွါးရေးသမားတွေပါ ဒိပြင်နိုင်ငံတွေထက် မြန်မာပြည်ကိုဦးတည်နေကြတယ် လောလောဆယ်မတည်မငြိမ်ဖြစ်နေပေမဲ့ အချိန်ကစကားပြောမယ်လို့ထင်ကြတယ် ခက်နေတာမြေဈေး
ပြည်တွင်းကလူတွေလည်းဝယ်ထားသလို ပြည်ပကလူတွေပါဝယ်ထားလို့ အဆမတန်ဖြစ်နေတာ တရုတ် ဂျပန် ကိုရီးယား ထိုင်ဝမ် စင်ကာပူ မြန်မာပြည်မှာမြေဝယ်ထားကြတာ
ခုချိန်မှာ ရှားရှားပါးပါးပွင့်နေတဲ့ ပိတောက်က အဖိုးတန်တယ်။
(ဈေးထဲကနေ ၀ယ်ရလို့) :hee:
ပိတောက်ပွင့်ချိန်ကို အတွေးနယ်ချဲ့ပြီး ပြောသွားတော့လည်း တွေးစရာတွေ အများကြီး ပေါ်လာတယ်။